Warka Caalamka – Page 12 – Saraar Media
Home›All War›Category: "Warka Caalamka" (Page 12)
00 Dhul gariir xaddigiisu gaarsiisan yahay 5.7 ayaa shalay ka dhacay dalka Tanzania kaasoo dilay ugu yaraan 13 qof. Waxaa sidoo kale dhulgariirkaa ku dhaawacmay dad tiradoodu boqol sare u dhaaftay. Hayadaha dawliga ah ee dalkaa ayaa sheegay in dhul gariirku ka dhacay xadka dalkaasi la wadaago Rwanda gaar ahaan meel u dhow harada Lake Victoria. ...
00 Dowladda Turkiga ayaa ganaaxday in ka badan 11,000 oo macallimiin looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda la mamnuucay ee Kurdishka. Tallaabadan ayaa kuso aadeesa iyada oo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in Turkey ay qabanayaan howlgalka ugu weyn ee abid ee ka dhanka ah kooxda PKK ee koonfurta bari dalkaasi. ...
Suuqii Somalida “ISLII” ee Nayroobi ku yaalay oo Dib Loo Furay
00 Inkastoo shalay mar kale dib loo furay suuqa xaafada Islii ee Nairobi ayaa waratada oo amar lagu siiyay in meelihii ay ku ganacsan jireen aysan ku ganacsan ayaa waxaa waratadu arinkaa ka keeneen cabasho. Waratada ayaa waxaa markii hore ka cawday dukaanleyda oo ayagu sheegay inay suuqa ka xiraan, hortooda ay alaabo la fariistaan ...
00 Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dadka masuulka ka ahaa afgembigii fashilmay ee Turkiga. Waxa uu hadalkaasi ka jeediyay kullan uu si gaar ah ula yeeshay madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan. Labadan masuul waxa ay kawada qeybgalayaan shirka dalalka dhaqaalaha ku hormaray ee G-20 ee ka socda Hangzhou. ...
00 Mucaaradka dalka Itoobiya ayaa codsaday in loo soo sii daayo xubno ayaga ka tirsan oo ku xiran jeelasha dalkaasi Itoobiya. Mucaaradka ayaa ka codsaday dawlda Haile Mariam Desalegn in ay soo siidayso xubnahooda oo muddo u xirnaa dawlada. In dhawaale waxaa ka socday dalka Itoobiya mudaaharaadyo qowmiyadaha qaar ay uga cabanayaan waxyaabo dhowr ah ...
Dhageyso; Rabshado Maanta ka Dhacay Suuqa Soomalida ISLII ee Nayroobi ku Yaala
00 Rabshado u dhaxeeya ganacsatada Waratada ee Suuqada Islii iyo Ciidamada Booliska ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen suuqa Islii ee magaalada Nairobi. Rabshado u dhaxeeya ganacsatada Waratada ee Suuqada Islii iyo Ciidamada Booliska ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhaceen suuqa Islii ee magaalada Nairobi. Arrintaan ayaa imaaneysa kadib markii saaka dib loo ...
00 Bishii May ayaa si kumeel gaar ah shaqada looga joojiyey Madaxweyne Roussef kadib markii Aqalka hoose uu ansixiyey mooshinka laga keenay inay been ka sheegtay miisaaniyada iyo dakhliga dowlada xiligii ay ku jirtay ololihii doorashadii 2014. Eedayntaasi ayey beeniysay Dilma Roussef oo ku tilmaamtay mooshinkan Inqilaab ay soo abaabuleen xubno horey uga tirsanaa xulafadeeda ...
00 Halkan hoose ka daawo Xarutnii Baarlamaanka Dalka Gaaboon oo la gubay ka dib markii la sheegey in Madaxweynaha dalkaas uu ku guuleystey doorashada isla markaana uu ku soo noqday xukunka.
00 Kenya ayaa sheegtay in ay dhoofin doonto shidaal markii ugu horaysay bisha June sanadka danbe. Waxay soo saari doontaa marka hore kumanaan barbiil maalintii, laakiin madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in wadanka uu doonayo inuu noqdo wadan dhoofiya shidaal badan laba sano gudaheed. Shidaalka, oo laga helay afar sano ka hor galbeedka Kenya ee ...
00 Dhulgariirkan oo cabirkiisu yahay 6.2. Meeshii uu dhulgariirka ka dhacay ayaa u dhawayd magaalada Norcia oo u dhow Perugia. Dhismayaal ayaa dumay dad badan ayaa ku dhintey oo gaaraya ilaa 40 inta hada la ogyahay, wali wuu socdaa gurmadka dad badan ayaa la layahay Duqa magaalada Amatrice ayaa sheegay in cod laga maqlayo burburka, ...